Amakhasimende | Umthetho nokuningi BV
Inkampani » Amaklayenti Wethu
Ngokomlando, iNetherlands ibilokhu iyindawo ekhangayo kakhulu yokuhlela imisebenzi yayo ye-EU nemisebenzi yomhlaba wonke ukusuka, ukutshala imali, ukuthuthukisa nokwenza ibhizinisi. INetherlands iyaqhubeka nokudonsela inani elikhulu lezinkampani zobuchwepheshe nezobuchwepheshe bamazwe ahlukahlukene kanye “nezakhamizi zomhlaba”.
Our Iklayenti Lenkampani ukuzijwayeza kugxila ezinhlobonhlobo ezahlukene zezinkampani ezisebenzisana namanye amazwe ezifana nezinkampani zomphakathi nezizimele ezihlanganiswa zombili eNetherlands nangasemngceleni.
The Amakhasimende Ezimele Umkhuba Wezomthetho nokuningi ugxile ekusizeni kwabantu nemindeni yamazwe omhlaba, abahlela imisebenzi yabo yebhizinisi ngokusebenzisa amandla weDashi. Amakhasimende ethu aphesheya aqhamuka emazweni ahlukene nezizinda ezahlukahlukene. Bangosomabhizinisi abaphumelelayo, abachwephesha abaqeqeshiwe kakhulu nabanye ubuntu abanezintshisakalo namafa ezindaweni ezahlukahlukene.
Amakhasimende ethu Anobumbano Nezizimele ahlala ethola ikhwalithi ephezulu efanayo yezinsizakalo zomthetho ezenziwe, ezinikezelwe futhi ziyimfihlo, eziklanyelwe ngqo ukufeza izidingo nezidingo zazo ezithile.